Pfungwa yekuti watchOS 6 ingatarise sei | Ndinobva mac
Vazhinji ndivo vashandisi vakatomirira iyo WWDC 2019 kuti ibatwe kuti vaone ndeapi mashoko achauya kubva paruoko rweiyo inotevera vhezheni yeWOSOS, vhezheni nhamba 6, vhezheni iyo vamwe mushure mekuguma kwechiitiko chekuratidzira cheMusangano weVashanduri chichawanikwa chete kunharaunda ino.
Zvichakadaro, iwo musi unosvika, nhasi tinokuratidza iyo pfungwa yekuti mawatchOS angavandudze sei Maererano naMat Birchler. Matt anotiratidza kudzoreredza kweSiri wachi yekutarisa, iyo nzvimbo yanga yave nesu kweanoda kusvika makore maviri uye iyo yatove zviri kwauri kuti uvandudze kuratidza rumwe ruzivo, neine yakachena uye yakawanda modular interface inotsiva iyo iripo interface nemakadhi.
Iyi interface nyowani yaizotiratidza iwo iwo iwo akafanana ruzivo uye zvinoshandiswa sezvazviri kusvika zvino, asi panzvimbo pekushandisa makadhi zvaigona shandisa modular complication maitiro sekukuratidza kwatinoita mumufananidzo uyo musoro wechinyorwa ichi. Iyi nyowani dhizaini yaizobvumidza kunyorera kuratidza kwetsika maficha neruzivo rwatinonyatsoda kuratidzwa pachiratidziri.
Pfungwa iyo Matt anotipa, inotiratidza kuti Apple yaigona sei sanganisa iko kunyorera kuteedzera kurara uchishandisa iyo ringi system inozivikanwa nekambani yeCupertino-yakavakirwa pamwe nekuwedzera mamwe maficha ekuvandudza kudyidzana neruzivo rwunokosha kwatiri.
Chimwe chinhu chitsva icho sekureva kwaMat, zvingave zvinonakidza kuona mune inotevera vhezheni yeWOSOS, tinoiwana mumushandisi interface patinowana iwo maapplication ataisa. Zvingave zvakanaka kutora mukana weiyo 44mm modhi yekuratidzira, kuratidza mashandisiro acho muchimiro che gridhi, kwatinogona kupururudzira kuti tikwanise kuratidza chikamu chemukati pechishandiso uye nekudaro tinowana yega yega nekukurumidza.
Zvingangodaro, hapana kana imwe yemafungiro aMat ichave inowanikwa mune inotevera vhezheni yeWOSOS, asi zvingave zvinonakidza chaizvo kana Apple ikacherekedza zvirevo zvinoitwa nevamwe vagadziri, sezvazvakaita nenharaunda yevasungwa, nharaunda yeiyo kuteedzera huwandu hukuru hwetweaks iyo kusvika panguva iyoyo ndiyo yainyanyo kufarirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Pfungwa yekuti watchOS 6 ingatarise sei
Apple inoburitsa yechina beta ye macOS Mojave 10.14.4 yevagadziri
Iyo Sims 2: Pet Nhau dzinowanikwa chete 1 euro kwenguva yakati wandei